भ्यालेन्टाइनमा उनलाई सम्बोधन | Hamro Okhaldhunga
भ्यालेन्टाइनमा उनलाई सम्बोधन
प्रकाशित मिति: ०२ फागुन, २०७४
तिम्रो खबर के छ त्यो त म जान्दिनँ । तिमी कहाँ छ्यौ र को हौ त्यो पनि मलाई थाहा छैन । तर, आज म तिम्रै नाममा यो पत्र सम्बोधन गर्दैछु । मलाई लाग्छ, तिमी मेरा यी दुई शब्द सहजै स्वीकार गर्नेछ्यौ ।
आज भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस । संसारका करोडौँ प्रेमिल जोडीहरूले आजकै दिनलाई जीवनभरिकै अविष्मरणीय क्षण व्यतीत गर्दैछन् । हुन सक्छ, म पनि यही पत्रमार्फत् तिम्रो बारेमा कुनै पल सम्झूँला । र, लेखूँला फेरिफेरि पनि ।
म तिमीलाई सोध्न चाहन्छु, तिमी भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदै छ्यौ कि छैनौ भनेर । अनि यो पनि सोध्न चाहन्छु, कोसँग मनाउँदै छ्यौ भनेर । मेरो सोधाइ तिमीलाई अस्वभाविक लाग्न सक्छ । हुन सक्छ, तिमी मेरो प्रश्नले निकैबेर रिसाउने छ्यौ । र, तिमीले उल्टै मलाई नै सोध्नेछ्यौ, तिमीलाई मेरो विषयमा किन चासो हँ ?
तिमीलाई म आज भ्यालेन्टाइन डेको इतिहास बताउँदैछु । र, यसको महत्व बुझाउँदैछु । कुरो तेस्रो शताब्दी अर्थात् सन् २६९ को हो । त्यतिबेला रोमका शासक सम्राट क्लाउडियस दोस्रो गद्दीमा थिए । सम्राट क्लाउडियसले आफ्नो देशको सैन्य दस्ताको आकार ठूलो बनाउने कुरा सोचे । त्यसका लागि उनले युवा र अझ अविवाहितलाई सैन्य भर्ना गर्ने उर्दी समेत गरे । धेरै जना त युद्धमा संलग्न हुन चाहँदैन थिए । उनीहरू आफ्ना श्रीमती र परिवार छाडेर सेनामा भर्ती हुन चाहेनन् । सम्राट रिसले मुर्मुरिए । पुनः उनले सोचे, मान्छेले विहे गरेन भने उसको परिवार (श्रीमती) हुने छैन र ऊ सेनामा टिकिरहेनछ । उनले घोषणा गर्न भ्याए, ‘अब उप्रान्त रोममा विहे हुनेछैन ।’ सबैका लागि त्यो घोषणा प्राकृतिक नियमको विपरित थियो ।
भ्यालेन्टाइन डेलाई मिलनको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले त धेरैजसो जोडीहरू प्रेम प्रस्ताव राख्नुपर्दा भ्यालेन्टाइन डे पर्खेर बसेका हुन्छन् । हुनसक्छ, हाम्रो समाज अझै खुलिसकेको छैन । पश्चिमा संस्कृति भित्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू पनि छन्, यही समाजमा । र, भ्यालेन्टाइन डेलाई एउटा चाडको रूपमा मनाउने पनि छन् यही समाजमा ।
संयोग, रोममा भ्यालेन्टाइन नामक पादरी थिए । उनले सम्राटको उर्दीको विपरित लुकिछिपि जोडीहरूलाई विहे गराइदिन थाले । एक कान, दुई कान हुँदै यो कुरा सम्राटको कानसम्म पुग्यो । भ्यालेन्टाइनलाई पक्राउ गरियो र जेलमा थुनियो । जेलरकी छोरी उनलाई भेट्न जेलमा आइरहन्थिन् । झुण्ड्याइनुअघि उनले ‘लभ फ्रम योर भ्यालेन्टाइन’ भनी हस्ताक्षर गरी एउटा नोट ती महिलालाई दिए । भ्यालेन्टाइनलाई सन् २६९ को फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन झुण्ड्याइयो ।
भ्यालेन्टाइनलाई झुण्ड्याएर फासी दिइयो । तर ती महिलालाई भ्यालेन्टाइनले दिएको नोटबाट नै भ्यालेन्टाइन डेको दिन आफ्नो सन्देश लेखेर दिने प्रचलन चलेको विश्वास गरिन्छ । भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनबाट नै भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थालिएको हो । यसबाट केचाहिँ पुष्टि हुन्छ भने प्रेममा पुरानो इतिहास र परिभाषा लुकेको छ । प्रेम गर्नु मानिसको स्वभाविक प्राकृतिक देन हो । त्यसैले आजभोलि प्रेमसँग सरोकार राख्ने कैयौं घटनाहरू पनि सुनिने गर्छन् । अखबारहरूमा तिमीले पनि पढ्ने गरेकी छ्यौ होला । ‘मिलन–विछोड’ का कुराहरू भोग्ने क्रममा छ्यौ होला । वा भोगिसेकेकी छ्यौ होला । जे होस्। तिमीलाई सम्बोधन गरेर भ्यालेन्टाइनमा एउटा सन्देश लेख्ने अवसर पाउँदा आफूलाई धन्य ठानिरहेको छु ।
भ्यालेन्टाइन डेलाई मिलनको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले त धेरैजसो जोडीहरू प्रेम प्रस्ताव राख्नुपर्दा भ्यालेन्टाइन डे पर्खेर बसेका हुन्छन् । हुनसक्छ, हाम्रो समाज अझै खुलिसकेको छैन । पश्चिमा संस्कृति भित्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू पनि छन्, यही समाजमा । र, भ्यालेन्टाइन डेलाई एउटा चाडको रूपमा मनाउने पनि छन् यही समाजमा । तिमीले भ्यालेन्टाइन डे मनाउनै पर्छ भनेर त सुझाव दिन्नँ, तर यसका राम्रा पक्षहरूको अनुशरण भने तिमीले गर्नैपर्छ । भ्यालेन्टाइनले एकातिर साथीभाइमा मित्रताको सदभाव राखेको छ भने अर्कातिर विकृति पनि । हरेक फेब्रुअरी १४ मा विश्वभर मनाइने भ्यालेन्टाइन आजभोलि युवामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । त्यसैले त वर्षौवर्ष पहिले विछोड भएका प्रेमी प्रेमिका पनि भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा भेट हुने गरेका छन् ।
अझ हाम्रोजस्तो रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने देशमा त भ्यालेन्टाइन डेले थप महत्व थपेको छ । रोजगारीका लागि विदेश पुगेको युवा आफ्ना छोराछोरी र परिवारमा माया र सद्भाव साटासाट गर्न भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर घर फिर्नेहरू पनि छन् । भ्यालेन्टाइन डेको महत्व त उनीहरूलाई पो सोध्नुपर्छ, जो आफ्ना परिवारसँग माया साट्न घर फर्किरहेका छन् ।
तिमीसँग भ्यालेन्टाइनले पारेका असरहरूको बारेमा पनि केही कुरा गरौँ । आजभोलि भ्यालेन्टाइन डेसँग जोडिएर कैयौ घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । युवा पुस्तामा यौनसँग जोडिएर आएका घटनाहरू विकृति होइनन् भनेर अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । भ्यालेन्टाइनले गम्भीर असर पनि पारेको छ । भ्यालेन्टाइनले माया र सदभाव साटासाट गर्नुको साटो प्रेम गर्नतर्फ युवापुस्तालाई उद्यत गरेको पाइन्छ । धेरैजसो राम्रा कुराहरूसँग जोडिएर नराम्रा कुराहरू पनि आउने एकाले यस्ता स्वभाविक घटनाहरूलाई सच्याउँदै लानु तिमी हाम्रो दायित्व पनि हो ।
हेर त, विकृतिले मानिसलाई कति चाँडै सखाप पार्दोरहेछ, आजभोलि सार्वजनिक हुने अधिकांश आत्महत्याको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रेमसँग जोडिएका घटनाहरू धेरै छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि औसत १२÷१५ जनाले दैनिक आत्महत्या गर्छन् । डाक्टरहरूका अनुसार डिप्रेसनका कारण अधिकांशले आत्महत्या गर्छन् । यो भनेकै माया र सद्भावसँग जोडिएको छ नि, होइन र ?
तर, तिमी यी सबै कुराबाट राम्रा र नराम्रा कुरा छुट्यषएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हरेक कुराको खराब पक्ष हुन्छ, त्यसैले यसबाट तिमी जोगिनुपर्छ ।
–उही तिम्रो हितैषी
हाम्रोओखलढुंगा डटकमको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा जोडिनुहोस्-
ओखलढुंगामा शिवरात्री मनाइँदै
भ्यालेन्टाइनमा उदाए जनक
०३ साउन, २०७६